The xijaab iyo dhar ka marag furaa in ay yihiin Muslimiin.
Gabadh yar oo xiran Xijaab ah.
Marka dhallinyarada haweenka Swedish Muslimiinta, waxay ka dibna si degdeg ah u qaataan si ay iwada ku Muslim. Waxay tani ma uu samayn ka hor inta aysan ahaa Muslimiinta. safaleeti ama xijaab ayaa sidaas noqday qirasho ah in hadda ay yihiin Muslimiinta iyo ka tirsan Islam.
Waxa uu goobta wadada caadiga ah
Waxaan ku noolahay siddeed kiiloomitir Forserum. In Forserum ku nool yihiin Muslimiin badan. Marka waxaan u imid inaan Forserum aan si toos ah aan gaariga ka arki dumarka Muslim socdaan jidadka. Waa goobta a wadada caadiga ah.
Sidee baan ku ogaan karaa in ay jiraan Haweenka Muslimaadka ah? Waxaan ku arki on dharkoodii. Waxay leeyihiin cimaamado madaxooda iyo dhar dhamaystiran on. dharkoodii sidaas daraaddeed ka marag furaa in ay yihiin Muslimiin.
Waxaan arki dad aan lahayn, kuwaas oo dhar on, waxaan u malayn maayo, maxaa yeelay, waxay yihiin Muslimiinta. In si kale loo dhigo, dharka qirashada in ay yihiin Muslimiin. Waxay dunida in ay yihiin Muslimiinta muujiyaan.
timaha oo laabta ku dabool
Waxa uu leeyahay Quraanka in Haweenka Muslimaadka ah waa in ay jirkooda daboolaan iyo xabadka la iwada ama xijaab. Waayo, sidaas si ay u muujiyaan in ay yihiin Muslimiinta si ay rag aan la website-ka Muslim sida iyaga dhiba islam.se. Haddaba sidaasaan uga kufsadaan. Waxay ku tusi doonaa in aanay addoommo ama aan rumaysanayni in ay lacag la'aan ah waxaa leh dadka ay u dhiba iyo kufsi.
Quran: waxaad ku dhahdaa gabdhaha mu'minaatka in ay hoos u fiiriyey oo ku ilaaliyaan qaybaha gaarka loo leeyahay iyo ma si ay u muujiyaan in ka badan oo Quruxdooda badan hufnaan waxaa laga yaabaa in la arki karo; Haddaba iyaga inay kasaan ay (Khimar) si ay laabtu ...
Waa aayaddan, tiro 31 ka mid ah cutubka 24-Quraanka ee, taas oo aasaas u ah soo xidho ilxidhka. Marka Muslimiinta hadlayaan aayaddan ku sheegay magaca Khimar tarjumay "xijaab" sida. Mohammed Knut Bernström this qor qorayaa qormo ah in aayadda ee fasirkiisa ee Quraanka:
magac The Khimar (plur Khumur.) tusinaysaa ilxidhka in haweenka carabta, ka hor iyo ka dib dhalashada of Islam ee taariikhda lahaa caado ka lifaaqaaya timaha. Sida laga soo xigtay ugu Mufasiriinta classic ilxidhka ka badan ama ka yar ornamental xirto, Itoob hoos ku deldesheen oo dhabarka iyo sababta oo ah dhar dumarka hoos faashiyoonadi markaas jirta ka mid nolol décolletage hore, wuxuu ahaa qayb ka bar dhaceen. Haweenka waxaa halkan weydiiyay sababta ay u qariyaan iyadoo la kaashanayo Khimar ah.
Mid ka mid ah faallo classical sida xusay Bernström waa Ibn Kathir (d. 1373) sharxaya erayga Khimar ka dhigan tahay wax daboolaya iyo in loo isticmaalo si ay u daboosho madaxa. Si aad u soo lifaaq ilxidhka ka dhigan tahay in ay u soo jiid ku wareegsan oo aad u ammaan ah. Taas waxaa la samayn doonaa in ka badan qoorta iyo laabta si aan waxba loo arki karaa iyaga ka mid ah. Ibn Kathir ayaa sidoo kale soo xiganaya Nebi of Islam Muhammad naagtiisii ​​'A'ishah:
nimcada Ilaah ee laga yaabaa inay ku dul haween oo ka mid ah Muhaajiriinta hore. Markaas Eebe ku soo Dejiyey aayadda: 'Haddaba iyaga kaga sugantahay dabool si ay u daboolaan laabta' ay jeexjeexeen bodices iyo iyaga dul saaray.
Ujeedada ilxidhka iyo dharka Muslim waa in aanay soo jiitaan dareenka. Laakiin waxaan idinku leeyahay in ay tahay mid kasoo horjeeda. Indhahaygu waxay si toos ah keentay in ay dharka iyo kasaan kala duwan by Haweenka Muslimaadka ah xirtaan. Waxay u istaagaan soo baxay dadkii badnaa.
Si aad u jar loo arko inay ahaadaan sax yihiin tiro ka mid ah xaaladaha ay tahay in la buuxiyo. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Waxay dabooli doontaa jirka oo dhan, sida kor lagu sharaxay.
Waxaa waa in aanay noqon Qurux iniinahoodu ku dhex jiraan. dahaarka The In si kale loo dhigo, ma soo jiidan doonaan dareenka aan loo baahnayn laftiisa in, taas oo dabcan waa mid ka mid ah la xidhiidhaa aayadda 24:31.
dharka waa in aanay noqon hufan.
Waa in ay noqon dabacsan oo kale ah kama leexan si ay u muujiyaan foomamka jirka ama la cadariyey.
Waa in aanay u eg dharka ragga ama dharka gaalada.
Ninka ayaa dharka
Saaxiibka Abu Umamah ii sheegay in uu maqlay nabiga Muhammad - nabadgalyo korkiisa ha ahaato - dhihi
ii damaanad lix waxyaalood oo anigu waan idin damaanad Jannada: markii mid idinka sheego, uu been uma sheegi doono, ayuu ku Aaminto wax ma uu gacangelin doona isku halleeya, hadii uu ballan uu u yaboohay ma jebin doono, hoos indhahaaga, qaban dib gacmahaaga iyo ilaaliyo qaybaha khaaska ah [jidhka].
Sida ay jiraan sharciyo ku saabsan habka dharka dumarka waa in si sax u noqdo, waxaa sidoo kale waa rizqiga nin ee u lebbisan. Waxaa ka mid ah in ay la oggol yahay (xalaal ah), taas oo macnaheedu yahay tusaale ahaan in ay tahay in aan la xariir ama ku jira dahab markii labadan maaddooyinka loo qoondeeyo haweenka. Waxay sidoo kale waa in aanay noqon khafiif ah ama hufan si ay u muujiyaan mid ka mid ah qaybaha jidhka Mannan ma socon (awrā '). Waa in aanay ku dayan dharka gaalada iyo waxaa lagu talinayaa (mustahabb) inay xidhaan dhar cad. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale ka mamnuuc inay xirtaan dhar u istaagaan soo baxay sidan oo kale in ay noqdaan iyo side waa caan ah oo caan ah, waxaa ka dareenka ah.
Caruurta yaryar ay is daboolaan
Waxay sheegeen in markii caruurta soo galay qaangaarka, waxay ku xiran inay kasaan, laakiin waxaan inta badan arki carruurta yaryar xirtaan kasaan. Sidaas, carruurta ayaa noqotay galmo iyo qirayaa isag in iimaanka Muslim.
Mona Sahlin oo Lena Hjelm-Wallens cimaamado
On September 11, 2001 arkay weeraro argagixiso laga cabsado ee dalka Mareykanka in lagu dilay ilaa 3,000 oo Maraykan ah oo abuuray dagaal dambena ma aad looga cabsado. Marka xubnaha Dowladda Mona Sahlin iyo Lena Hjelm-Wallen sameeyey galay masjid ku Swedish la cimaamado madaxyadana waxay ku duudduubteen. Tani waxay waxyeeli Dabcan badan oo laga yaabaa in muuqdaan sida fal aan la fahmi karin.
EEG SAWIR: Mahmoud Aldebe, Lena Hjelm-Wallen iyo Mona Sahlin ka dib markii 11 September ee booqasho uu ku masaajid .
Haddii aad tahay nooc, ma sii conspiratorial, waxaa la laga yaabaa in ay taageero u muujiyaan, laakiin hadda iwada waa qirashada iimaanka Muslim, taas oo aanu ka wada hadalnay si faahfaahsan ee qodobkan, taas oo ahayd ay cimaamado ma aha qirasho ah in ay iimaanka Muslim!
Maxaad u malaynaysaa Muslimiinta fekerayo markay arkeen laba iwada xubnaha qurxinay dawladda? Waxayna u maleeyeen inay ahaayeen Masiixiyiin? Ama iyaga loo gudbiyaa Muslimiinta? Waxay qataara maragga by gambooyinka in ay ahaayeen Muslimiin.
Joogsan in Mona Sahlin waa Muslim
Laakiin xaqiiqada ah waa in uu jiro marag ah, ama ugu yaraan oggayn in Mona Sahlin run ahaantii waa Muslim ah. maragga Tan waxay ka timaaddaa naagtii Muslim Nalin Pekgul jeeda doorashada guud:
"Qof Mona Sahlin, tusaale ahaan, in ay sax doonaa Tensta ka badan, sababtoo ah waxaad u malaynaysaa in ay tahay damiin ka mid ah xuquuqda dadka kale in ay dalka this ka badan laga yaabo in Muslimiinta kale oo badan kuwaas oo aan marnaba sax lahaa."
My geesi. iyo:
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in ay (Sahlin) ayaa hogaaminaya liiska maxaa yeelay, waxaan iyada rumaysan, waxaan ka iibin karaan lacag kasta ee Tensta, laakiin waxaa laga yaabaa ma waxaan ka iibin lahaa ahay wax kale ee Muslimiinta ee si la mid ah"
State Booqashada Iran ee 2017
In xidhiidh la leh booqasho xukuumadda ee ah in Iran ee February 2017 qaadeen ilxidhka wasiir dhaddig. Tani dabcan ahaa mid aad u la yaab leh la siiyay in ay ka qaybgalayaashu dumar ah booqasho dalalka kale 'aan dareemay khasbanaaday in uu sidaas oo kale sameeyaan.
EEG SAWIR: Wasiirada ee gambooyinka.
Sidaas waxa uu ahaa wax gaar ah si ay wafdiga Swedish. Tani waxa ay ahayd wax ka badan hadal ah oo naxariis ama sasabasho ah? waxa ay ahayd qirasho rumaysadka Muslim?
Ann Linde ilxidhka daaha ka iyada siyaasadda
Wasiirka arrimaha dibadda ee hadda Ann Linde ayaa Ganacsiga ee xiran Xijaab ee Iran booqo 2017.
Qaar badan oo sida xaqiiqada ah ugu farxay warka ah in Margot Wallström casili doono, laakiin farxad ahaa gaaban ku filan la siiyo in Ganacsiga Ann Linde eftertädde iyada.
Waxay ahayd in booqashada in Iran ee February 2017 iyo naftooda (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) xijaabi ay weheliyaan wasiirada kale ee dumar ah. Ka fiirsaneysa in ay ilxidhka qaaday si this siinaysaa dareen ah in iyadu ma aha dhexdhexaad ah ee khilaafka u dhexeeya reer binu Israa'iil iyo Falastiin.
Dhab ahaan Iyadu waa ka dhanka ah dimuqraadiyadda oo kaliya Bariga Dhexe ee, Israa'iil iyo tagaa ku sugan anaguna raadkooda isaga ka horeeyay Margot Wallström ayaa.
2011 loo magacaabay Falastiin Association Ann Linde "sano Falastiin" la bayaankan soo socda:
Ann Linde, iyada oo ay shaqo iyo daahirinteeda, safaradiisa Falastiin iyo Israa'iil, xiriirada iyo wadahadalada labada dhinac, nuuxnuuxsaday xaaladda Falastiin 'la lucidity, Hufnaan iyo geesinimo, ugu dhawaan sida aqoonsiga Yeruusaalem East sida caasimadda ah ee Falastiiniyiinta mustaqbalka State iyo aqoonsiga Palestine sida tirada xubnaha ka ah 194 ee Qaramada Midoobay. halganka Ann Linde ee nabada iyo cadaalada ayaa mar walba diiradda la saarayo sharciga caalamiga ah iyo mabaadii'da xuquuqda aadanaha.
ilxidhka daaha ka waxa ay siyaasadda Bariga Dhexe, ayay ganacsiga dhaqaaqaan. Sidaas halkan ayay ku tiri dabcan dimuqraadiyadda ah ee Tel Aviv ee 2008:
"Khilaafka u dhexeeya reer binu Israa'iil iyo Falastiin, halka ay shuruud ugu muhiimsan ee nabadda waa in shaqo Israel dhamaado, tani waa furaha oo dhan ee Bariga Dhexe la soo saari karaa jihada nabad ah."
Fiiro u yeelo in ay ka hadlaysaa "Palestine" sida dal horay sanadkii 2008, laba sano ka hor ay dowladda bulsho dimuqraadi ah u aqoonsaday dal, inkasta oo aanay ahayn dal.
ilxidhka ma waxaad badbaadin kartaa
In Tehran, Iran noqday qof dumar ah oo 2018 lagu xukumay laba sano oo xabsi ah, waayo dambiga Muslim in si cad uu indhashareerteedii iska dhigtay . In labada bilood ee la qabtay 30 haween ah ku salaysan oo ay diideen inay xirtaan ilxidhka.
Sharcigu waxa uu ku soo xidho ilxidhka loogu tala galay dumarka labada Muslim iyo kuwa aan Muslimka ahayn ee Iran ayaa xoog tan iyo markii 1979th kacaanka Islaamiga ah dhiig leh
Ha si cad igu odhan: ilxidhka ma waxaad badbaadin kartaa. Halkii, waa hab inay wax dulmaan oo aad cabudhinayo, haddii aad tahay Muslim ama ma.
mid ka mid kaliya ee run ahaantii aad ku badbaadin karto iyo gabi ahaanba dhigay lacag la'aan ah Ciise Masiix.
Ilaah wuu idin jecel yahay
Ilaah dadka oo dhan jecel yahay, laakiin ilxidhka jirin mid ay ku badbaadin karto ama Ilaah ka farxin. Waa in aad ku badbaadi oo runtii fadlan Ilaah, markaas waa in aad aqbasho Wiilkiisa Ciise Masiix ah kii uu soo diray dunida ugu soo galay si uu ugu dhinto iskutallaabta ah si uu idiin badbaadiyo.
Ciise waa nool yahay maanta - Kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay. Marka aad isaga hesho waad badbaadi doontaa oo lacag la'aan ah. Ciise Masiix runtii dhigaya dad xor ah.
Kitaabku waxa uu sidoo kale waxaa loola jeedaa ilxidhka ama iwada in, laakiin macnaha halkan waxaa cad in aan sharci jirin oo aan caadada. Ciise ayaa dadka lacag la'aan ah, ma sababtoo ah waxay mar kale u socdaa in la haystaa maxaabiis, laakiin in ay sii free.
Mona Sahlin diinta Islaamka?
Vecka 31, måndag 2 augusti 2021 kl. 16:38